Akụkọ - salesgbọ ala na China na-enwu dịka ụwa ndị ọzọ si na nje
Onye ahịa na onye na-ere ahịa na-ekwu okwu na ụlọ ahịa Ford na Shanghai na July 19, 2018. Thelọ ahịa ụgbọala na nnukwu akụ na ụba Eshia bụ ebe na-enwu gbaa dị ka ọrịa na-efe efe na-egbochi ahịa na Europe na US Qilai Shen / Bloomberg
Ochicho nke ugbo ala di na China n’agha n’ike n’ike, n’eme ka ahia nke ugboala di na akuku aku na uba mba Asia buru ebe di egwu ka oria ojoo coronavirus na enye ndi ahia ahia na Europe na US.
Ahịa nke sedan, SUVs, obere obere ụgbọala na multipurpose gbalitere pasent 7.4 na Septemba site na afọ gara aga gaa nkeji nkeji 1.94, ndị otu ndị njem ụgbọ njem China kwuru na Tuesday. Nke ahụ bụ mmụba nke atọ kwa ọnwa, ọ bụ naanị maka SUV ka ebugharị ya.
Delivegbọ njem ndị njem nyere ndị na-ere ahịa ruru pasent 8 ruo nde 2.1, ebe ngụkọta ahịa ụgbọala, gụnyere gwongworo na bọs, gbasaa pasent 13 ruo nde 2.57, data ndị China Association of Automobile Manufacturers wepụtara ka e mesịrị.
Site na ire ere akpaaka na US na Europe ka COVID-19 na-emetụta, ịghaghachi ihe achọrọ na China bụ uru nye ndị nrụpụta mba na ụlọ. E setịpụrụ ka ọ bụrụ mba izizi ụwa niile iji laghachite na ogo olu 2019, n'agbanyeghị naanị site na 2022, dịka ndị nyocha gụnyere S&P Global Ratings si kwuo.
Ndị na-eme ngwa ngwa n'ụwa niile etinyela ọtụtụ ijeri dollar na China, ahịa ụgbọ ala kachasị elu n'ụwa kemgbe 2009, ebe ndị otu na-etiti na-agbasawanye mana ịbanye n'ime ka dị obere. Sdị sitere na mba dịka Germany na Japan ebutela ọrịa a nke ọma karịa ndị obodo ha - ngụkọta ahịa nke ụdị ndị China dara na 36.2 pasent n'ime ọnwa asatọ mbụ site na elu nke 43.9 pasent na 2017.
Ọbụna dịka ahịa ụgbọ ala ndị China na-agbake, ọ ka nwere ike ịdekọ ọkwa nke atọ kwa afọ na ahịa, Xin Guobin, onye osote onye ozi na Ministry of Industry and Information Technology, kwuru n'ọnwa gara aga. Nke ahụ bụ n'ihi oke ọdịda dara na mbido afọ, n'oge elu nke ntiwapụ ahụ.
Ka o sina dị, ọ na-eme ka mkpa China dịwanye ukwuu site na elekwasị anya na ịzụlite ọkụ eletriki ụgbọ ala, ngbanwe teknụzụ nke ndị na-emepụta igwe na-etinye nnukwu oge na ego. Beijing chọrọ ka ụgbọ ala ndị ọhụrụ na-eme ihe ruru pasent 15 ma ọ bụ karịa nke ahịa na 2025, ma ọ dịkarịa ala ọkara nke ahịa niile afọ iri gachara.
N'ogbe nke NEV, nke nwere ụgbọ ala eletrik dị ọcha, ngwakọ na ngwongwo mmanụ, rịrị 68 pasent na nkeji 138,000, ndekọ maka ọnwa Septemba, dị ka CAAM si kwuo.
Tesla Inc., nke malitere nnyefe sitere na Shanghai gigafactory ya na mbido afọ, rere ụgbọ ala 11,329, site na 11,800 na August, PCA kwuru. Onye na-arụ ụgbọ ala America bụ onye nke atọ na NEV na-ere ahịa n'ọnwa gara aga, n'azụ SAIC-GM Wuling Automobile Co. na BYD Co., PCA gbakwunyere.
PCA kwuru na ọ na-atụ anya na NEV ga - enyere aka ịbawanye ahịa ahịa akpaaka na nkeji nke anọ na iwebata ụdị ọhụụ ọhụrụ, ebe ike na yuan ga - enyere aka belata ọnụ ahịa na mpaghara.
Ogologo ugbo ala ugbo ala zuru ezu karie ugbua kariri amụma nke gara aga maka onu ogugu 10 n'ihi ekele nke nloghachi a choro, ka Xu Haidong, onye isi ochichi injinia na CAAM kwuru, na-ekwughi ya.
Shock Absorber kpọchie, Ogige Ulo, Taya Ball Joint, Shock Absorber Rubber, Hood Shock Absorber, N'iru n'iru Knuckle,